“Maraykanku Wuxuu U Baahan Yahay Inuu Aqoonsado Somaliland Ka Hor Inta Aanu Ruushku Ictiraafin” Michael Rubin – somalilandtoday.com
(SLT-Hargeysa)-Michael Rubin oo ah macalin sare iyo sarkaal hore uga tirsanaan jiray Wasaaradda Gashaan-dhigga Maraykanka, ayaa dawladda Maraykanka u soo jeediyey inay aqoonsato Somaliland.
Wakaallada wararka Somaliland ee SOLNA, ayaa soo xigatay warbixin uu Michael Rubin shalay ku daabacay Wargeyska Washigton Examiner, oo ka soo baxa Maraykanka, oo uu ciwaan uga dhigay “Maraykanku wuxuu u baahan yahay inuu aqoonsado Somaliland ka hor inta aanu Ruushku ictiraafin.”
Michael Rubin wuxuu sheegay in inta badan dadka Maraykanku ay ka fikiraan Somalia, iyagoo sawiranaya diyaaradii Black Hawk Down, Budhcad baddeeda, carruur macaluulaysa iyo qaska ka taagan Somalia. Waxaanu tilmaamay in 148 Milyan oo qof oo Maraykan ahi oo ku dhow kala badh dadweynaha dalkaasi ay dhasheen intii ka dambaysay Burburkii Somalia, balse duruufahaas tabani aanay ka jirin Somaliland oo rubuc qarni ku naaloonaysay madax-bannaani oo muddo dheer la iska indho tirayey ay noqon karto meel muhiimad leh oo ay ku hirdamaan Maraykanka iyo Ruushku.
Waxa kaloo warbixintaas lagu sheegay in Somaliland ay 27kii sannadood ee ay madax-bannaanideeda la soo noqotay ay samaysatay dawlad taabogal ah, iyadoo aan adduunka ka helin wax taageero ah.
Sidoo kale, Micheal Rubin wuxuu is weydiiyey maadaama oo ay Somaliland samaysay horusocod sababta Maraykanku u xaaleyn waayey? Waxaanu tusaale u soo qaatay in Eritrea ay ka go’day Itoobiya, isla markaana South Sudan ay xornimadeedii ka qaadatay Suudaan. Wuxuu ku tirtirsiyey Maraykanka inay lama huraan tahay inay ictiraafaan Somaliland ka hor inta aanu Ruushku aqoonsi ugu beddelin Somaliland saldhig millatari oo uu ka furto magaalada Saylac oo ka tirsan Somaliland.